Miyaad i tusi kartaa hab wax ku ool ah ee abuuritaanka backlink leh websaydhada EDU?
Looma baahna in la sheego in xitaa hal ilbidhiqsi oo website-ka EDU uu noqon karo mid qiimo leh oo loogu talagalay boggaaga ama blogka, halkii aad ka heli laheyd baakad caadi ah oo leh dhibcaha PageRank. Nasiib daro, helitaanka xiriirka ilaha waxbarashadu maaha mid fudud sida aad uga fekereyso. Laakiin waxaan heystaa habab badan oo shaqeynaya si ay u dhamaystiraan hawsha - iyada oo la soo saarayo wax soo saar tayo leh oo tayo leh si ay u hesho dib-u-habboonaanta laga soo xigtay domain EDU. Oo hoosta ayaan u socdaa si aan dib ugu eego tallaabada qorshahan tallaabo. Waxaad ka kasban kartaa bogga internetka EDU - horumarinta xiriirka wanaagsan, tusaale ahaan jaamacadaha ama kulliyadaha, u siiyaan sheeko ku filan. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow, in ay noqon doonto hawl waqti wakhti badan oo adiga kugu habboon adiga. Taasi waa sababta ka hor inta aadan wax kale jirin, waa inaad si fiican u fekertaa haddii aad awoodi karto in aad qorato waxyaabo tayo sare leh oo waxbarasho oo aad adigu leedahay, ama sameyso hawlaha qorayaasha xirfadlayaasha ah - ha ahaato inaad dibadda u soo baxdo xirfadle xirfadleyaal ah ama tixgelin si aad u shaqaaleysiiso badeeco aqoon leh.
Dabcan, waxaa jira siyaabo kale oo ikhtiyaari ah oo laga yaabo inay qaadato wakhti yar. Si kastaba ha noqotee, intooda badani si sahlan ayaa loo turjumi karaa sida spam, haddii aan si haboon loo fulin. Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay inaad ka fiican tahay inaad ka faa'iideysato bogga internetka ee EDU oo leh wax tayo leh.
U diyaari inaad diiradda saarto sameynta tayo sare leh iyo maqaal u gaar ah oo si caddaalad ah u raali gelinaya dhageystayaasha bartilmaameedka - waqtigan aad u badan tahay inaad la tacaaltid ardayda kuleejada, macalimiinta ama shaqaalaha xubin ka ah maamulka. Sidaa daraadeed, xasuuso in aad bixiso waxyaabo khabiir ah oo loo isticmaali karo ujeedada waxbarashada - taas oo kaa dooneysa in aad maamusho cilmi qoto dheer ama ugu yaraan xirfado nololeed oo qiimo leh.
Waa waqti aad hoos ugu dhigi karto ganacsiga oo aad bilowdo. Waxaa jira siyaabo ficil ah oo lagu horumariyo xiriirka wanaagsan ee dadka saxda ah. Sidan ayaad kuugu kalsoonaan kartaa inaad ku dhajiso mawduucaada khabiirada iyo dib ugu noqo boggagaaga ama blogka:
Ugu horreyntii, waxaan ku talinayaa in aan tixgeliyo mashruuc faa'iido leh si loo horumariyo, tusaale ahaan wadashaqeyn la leh macalimiinta ama jaamacadaha. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan si aad u ogaatid mawduucyada ka mid ah danaha ugu sareeya ee hadda iyo qiimaha sarreeya ee dhammaantood - labadaba, barayaasha. Taas oo ah, wax walba oo aad horay u oggolaatay - waxaad xor u tahay inaad bilowdo inaad qorato waxyaabo waxbarasho oo lagu daabaco boggooda fasalka ee loo ogolaaday.
Next, isku day inaad sameyso iskaashato samafal ah - si dhab ah, waxaa jira kulliyado badan oo had iyo jeer diyaar ah oo diyaar u ah inay u diraan. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan waa inaad ku bixiso heshiis faa'iido leh - hubso in maadadaada ay wax ka qabato arimaha saxda ah, sida isuduwahaaga joogtada ah, ama wadahadallada mawduucyada kulliyadda kale ee u baahan dareen guud.
Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale la xiriirto joornaalada jaamicadda sare - oo si fudud kugula talin inaad bixiso boggaga martida ee boggooda waxbarashadooda si aad u hesho backlink a domain EDU. Si fudud u feker sida aad uga dhigi karto farxad inay kuugu soo diraan mawduucaaga - tixgeli inaad ku soo biirto khibrad xirfadeed, talooyin shaqo raadin, xiriir galabti ah ama sheekooyinka guusha, iwm.
Inay raad raacaan gadaal kasta oo ku saabsan boggaga internetka EDU markii ay sii socoto. Isla mar ahaantaana, waxaan kugula talinaynaa "xoqo" ilaha xiriir kasta oo cusub oo la isticmaalayo iyada oo la adeegsanayo pingmyurl. com ama qalabyada internetka ee kale ee la midka ah. Sidaa darted, waxaad wici doontaa raadinta raadinta bots si aad uga dhigto dhabarkaaga cusub inuu u muuqdo si dhakhso ah, markaa codsigeeda si aad u sarreeya Source .